နိုင်ငံရေး ဖြစ်ရပ်များနှင့် ငွေကြေးများ
ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့် နိုင်ငံရေး။ ဆက်နွယ်မှုရှိသလား?
ဈေးကွက်ကို နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များက စီးပွားရေးဒေတာထက် ပိုပြီးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာ သတိထားမိပါသလား? ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်မျိုးကို ရောင်းဝယ်သူများက ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ?
အဖြေကရိုးရိုးလေးပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် သူတို့ငွေကို စီးပွားရေးတောင့်တင်းပြီး တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံနှင့် တည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ မြှုပ်နှံကြပါသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံရေး မရေရာများမျိုးမဆိုသည် ပြည်တွင်းငွေကြေးကို ကျဆင်းစေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ယူပြီး၊ အားကောင်းသည့် ငွေကြေးမှာ မြှုပ်နှံကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီအရာအားလုံးသည် စီးပွားရေး ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ငွေကြေးကျဆင်းမှုကြီးကို ဖြစ်စေပါသည်။
သို့သော်၊ နိုင်ငံရေးအန္တရာယ်များသည် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် အနုတ်သဘောဆောင်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အရောင်းအဝယ်၏ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမှာ အားကောင်းသည့်ငွေကြေးတွင်သာမက၊ အားနည်းသည့်ငွေကြေးပေါ်မှာလည်း သင်အမြတ်ရနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ငွေကြေးအပေါ် နိုင်ငံရေးက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာ တိကျတဲ့ခန့်မှန်းမှုထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘယ်နိုင်ငံရေး ဖြစ်ရပ်က ဈေးကွက်ကို သက်ရောက်မှုရှိလဲ?
ဈေးကွက်ရှိ ဖြစ်ရပ်များနှင့် သူတို့သက်ရောက်မှုများကို ကြည့်ရန်အချိန်ကျပါပြီ။
၁။ ရွေးကောက်ပွဲများ။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ပြည်တွင်းငွေကြေးကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံနှင့် ငွေကြေးအပေါ် အာဏာရှိသူများက ဘာတွေပဲယူဆောင်လာပါစေ၊ ဈေးကွက်က ရွေးကောက်ပွဲကို အန္တရာယ်တစ်ရပ် ထည့်စဉ်းစားပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရှိ မည်သည့်နှောင့်နှေးမှုမဆို ငွေကြေးကျဆင်းစေပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှောင့်နှေးမှုဆိုသည်မှာ မရေရာမှုဖြစ်သည်။ မမျှော်လင့်သော ရလဒ်များသည် ဈေးကွက်မှ ဈေးလှုပ်ခတ်မှုကြီးဖန်တီးခြင်းအပေါ် ကြီးမားတဲ့လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေပါသည်။
ဥပမာ၊ ယခို၊ အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာထရမ့်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးကြီးဆုံး နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါသည် သူ့ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မစ္စတာထရမ့်၏ အောင်ပွဲကြေငြာပြီးနောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ပြိုလဲခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်၊ မစ္စတာထရမ့်သည် သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု လူနည်းစုကယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ဈေးကွက်မှ နိုင်ငံရေးတွင် စီးပွားရေးသမားများထံမှ ဘာမျှော်လင့်ရမလဲမသိဘူး ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂။ လူမှုရေး မတည်ငြိမ်မှု။ ဒေသခံများသည် အစိုးရအပေါ် ကျေနပ်ခြင်းမရှိသည့်အခါ၊ အာဏာဆန့်ကျင်မှုများဖြစ်လာစေပြီး၊ ရလဒ်အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှော့ချခြင်းဖြစ်လာသည်။ မြို့တော်များအနေဖြင့် လူမှုရေးပြိုကွဲမှုများကို ကြောက်ရွံ့ကြပါသည်။
၃။ တောဖြတ်ပြေးပြိုင်ပွဲ ငြင်းခုံမှုများသည် နောက်ထပ် အနုတ်သဘောဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် အနည်းဆုံး ငွေကြေးနှစ်ခုကိုသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် ဈေးကွက်အတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ တောဖြတ်ပြေးပြိုင်ပွဲ ငြင်းခုံမှု၏ အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်များဖြစ်သည်။ သာဓကများထဲမှ တစ်ခုမှာ ရုရှားရူဘယ်ထိုးကျစေမည့် ရုရှားအပေါ် အမေရိကန် ခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်သာဓကမှာ လူ့အခွင့်အရေး သဘောထားကွဲလွဲမှုပြီးနောက် ဆောဒီအာရေဗျနှင့် ကနေဒါကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး ကျိုးပျက်မှုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဆောဒီအာရေဗျမှ ကနေဒါသံအမတ်ကြီးကို ဖယ်ထုတ်ခဲ့ပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများနှင့် ဆေးလူနာများကို ကနေဒါမှဆွဲထုတ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကာ၊ ဆောဒီပြည်နယ် လေကြောင်းလိုင်း တိုရွန်တိုမြို့သို့ပျံသန်းခြင်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ကနေဒါဒေါ်လာသည် ယင်းအနုတ်သဘောဆောင်သည့်သတင်းများကြောင့် အနေအထားပျောက်ခဲ့သည်။
၄။ ဆန္ဒခံယူပွဲများ။ တစ်စုံတစ်ရာမှ နိုင်ငံညီညွှတ်ရေး (သို့) နိုင်ငံရေး အုပ်စုကို ခြိမ်းခြောက်လာသည့်အခါ၊ ငွေကြေးဈေးကွက်ကို သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟု သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
ဥပမာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄တွင်၊ စကော့တလန်သည် ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် ဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲမကျင်းပခင် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ဗြိတိန်ပေါင်မှ ဖိအားကြီးအောက်ကျရောက်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရလဒ်များအပေါ်သတင်းများသည် ပေါင်ကို အတက်အကျဖြစ်စေခဲ့သည်။
ယနေ့ထိ၊ Brexit သဘောတူညီမှုသည် အခြားစီးပွားရေးဒေတာထက် ဗြိတိန်ပေါင်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် အရေးကြီးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ၂နှစ်ကြာမှ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း၊ GBPပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုကြီးရှိနေပါသေးသည်။ ဗြိတိန်နှင့် ဥရောပကြား သဘောတူညီချက်အပေါ် မရေရာမှုများက GBP ကျဆင်းစေသည်။
၅။ နိုင်ငံတကာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများ။
မတူညီတဲ့နိုင်ငံများမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများသည် အမြဲသိသာထင်ရှားပါသည်။ ရောင်းဝယ်သူများသည် နိုင်ငံများအကြားနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အခြေအနေကြားကပါ ဆက်ဆံရေးအပေါ် သဲလွန်စရနိုင်ပါသည်။ ဂရိအရေးတော်ပုံ (သို့) ဥရောပတွင် အီတလီ၏ အခြားပါဝင်မှုကဲ့သို့ အရေးကြီးသောပြဿနာများအပေါ် ဆွေးနွေးပွဲများသည် ဈေးကွက်ကို သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာ၊ ဥရောပမှ အီတလီထွက်ခွာမည့် ထင်မြင်ချက်သည် ယူရိုအတွက် အလတ်စား-သက်တမ်းရှိ အကျလမ်းကြောင်းကို ဖြစ်စေသည်။
၆။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၏ မိန့်ခွန်းများနှင့် မှတ်ချက်များ။
ဈေးကွက်အနေဖြင့် တာဝန်ရှိသူများ ပေးတဲ့ မှတ်ချက်များနှင့် မိန့်ခွန်းများကို နီးစပ်စွာလိုက်နာပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဈေးကွက်၏ မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကို ဒီမှတ်ချက်များက ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ၊ ဇန်နဝါရီတွင် USD အားနည်းနေပြီးဖြစ်ပြီး၊ ဈေးကွက်သည် ဗဟိုဘဏ်မှ ၎င်းအားထောက်ပံ့ပေးမည့် ခြေလှမ်းများကို မျှော်လင့်ထားခဲ့သည့်အခါ၊ ဘဏ္ဍာရေးအတွင်းဝန် Steven Mnuchinမှ အားနည်းသည့်ဒေါ်လာသည် အမေရိကန်အတွက် ကောင်းသည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ ဒီမှတ်ချက်ပြီးနောက်၊ USD ကျဆင်းပြီး၊ အနိမ့်ကိုထိခဲ့ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များသည် ငွေကြေးဈေးကွက်၏ လမ်းကြောင်းကောင်းများဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသည့် ရောင်းဝယ်သူသည် မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာမဆို: အပြုသဘော (သို့) အနုတ်သဘောဆောင်သည့်အပေါ် အကျိုးကျေးဇူးရယူနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်မှ ငွေကြေးပေါ်ကျရောက်မည့် မှန်ကန်သည့်ခန့်မှန်းချက်ချနိုင်ရန် fbs.comတွင် သတင်းများကို လိုက်နာပါ။
မှတ်ချက်: အရေးကြီးဖြစ်ရပ်ကာလအတွင်း ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ရန် မကြာခဏ အကြံပြုချက်ပေးခြင်းများမရှိပါဘူး။ အကောင်းဆုံးဗျူဟာကတော့ ဈေးကွက်မျှော်မှန်းချက်အပေါ် ရောင်းဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်ကဘာကို မျှော်မှန်းလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ပြီး၊ ဒီဦးတည်ရာအတိုင်း ရောင်းဝယ်ပါ!